Fampiharana 127 izay tsy maintsy apetraka amin'ny Android | Androidsis
Ny lisitry ny fampiharana 127 an'ny Google izay tsy maintsy ananana
Google dia navoakany tato ho ato tao amin'ny Google Play ny lisitry ny rindranasa izay tsy maintsy ananana na hoe ilaina izy ireo. Amin'ny ankapobeny dia izy ireo 127 apps fa raha ny filazan'ireo tovolahy avy ao Mountain View dia tsy maintsy napetrakao ao amin'ny fitadidiana anatiny ny terminal anao.
Mazava ho azy, angamba mila mampiasa ny ankamaroan'ny fahatsiarovana ao anaty izay tsy maintsy apetraky ny telefaoninao na ny takelakao ny iray amin'ireo tena ilaina satria misy vitsivitsy, ary na dia maro aza, tsy midika izany fa tsy manana kalitao ampy izy ireo nanomboka teo dia fampiharana tsara avy amin'io lisitr'ireo fampiharana 127 io. Tumblr, Wunderlist, SketchBook Express na Kalandrie Sunrise santionany kely izy io.
1 Famakiana fampiharana
3 Fampiharana mozika
5 Fitaovana isan-karazany
7 Fanatanjahan-tena sy fanatanjahan-tena
Ao amin'ity fizarana ity ho hitanao ny Kindle, Pocket na boky maimaim-poana ankoatry ny maro hafa ary izany dia mamaritra ny fialambolin'ny mpampiasa maro rehefa manana takelaka na finday avo lenta hamakiana ireo karazana boky na lahatsoratra voatahiry ho avy eo aza izy ireo.
Mba hitazomana ny vaovao miaraka amin'ny vaovao rehetra miseho isan'andro dia misy maromaro ny miavaka ary anisan'izany ny The Wall Street Journal, The Huffington Post, News Republic na Flipboard. Na dia ny roa voalohany aza dia ny kinova an'ireo gazety manan-danja indrindra amin'izao fotoana izao, ny roa kosa dia manohy manara-maso ny toetrany na dia manamboatra ny gazetintsika manokana toa ny Flipboard aza.
SpotifySoundcloud, Shazam na Cross DJ Free dia ohatra mazava sasany amin'ny atao hoe mozika iray amin'ireo sokajy manan-danja indrindra ankehitriny ao amin'ny terminal Android. Manomboka amin'ny streaming mozika avy amin'ny fifandraisantsika Facebook manokana ka toy ny hoe afaka miditra amin'ireo andiany manan-danja indrindra amin'ireo DJ tsara indrindra amin'izao fotoana izao, dia misy ny azo atao tsy manam-petra amin'ny Android.
Ny sary Izy io dia iray amin'ireo saha misy fampiharana indrindra ao amin'ny Play Store. Pho.to Lab, Camly, EyeEm o PicsArt dia sasany amin'ireo fampiharana miseho amin'ity lisitra noforonin'i Google ity tamin'ny taona 2014. Fampiharana manan-danja sasany hanome lanja bebe kokoa ireo sary alainao amin'ny findainao.
Eto isika dia afaka mitanisa vitsivitsy avy amin'ilay mahagaga Pushbullet ary ny fomba mahavariana azy amin'ny fampandrindrana fitaovana hatramin'ny inona an'i Trello handamina asa isan'andro amin'ny alàlan'ny tabilao, na rindranasa toa ny CamScanner hahafahanay manadihady ireo antontan-taratasy ilainay eo amin'ny tranokala.
Duolingo is the exponent faran'izay betsaka amin'ity lafiny ity amin'ny zavatra ianarana amin'ny Android. Ny fampiharana hafa toa ny Painter Mobile na Sketchbook dia ahafahantsika manao sary amin'ny alàlan'ny efijery amin'ny takelaka na Babble hianarana fiteny hafa mety tsy ananan'i Duolingo.
Google tsy manadino iray amin'ireo sokajy manan-danja indrindra Android noho ny fampidirana sensor hafa izay manampy amin'ny fanaraha-maso fanatanjahan-tena isan'andro. Endomondo sy Runtastic dia iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra ho an'ity ary ohatra mazava amin'ny asa tsara ataon'ny mpamorona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny lisitry ny fampiharana 127 an'ny Google izay tsy maintsy ananana
Ary ny rohy mankany amin'ilay lisitra voalohany?
Nanavao ny fidirana tamin'ny rohy, eo am-piandohana! fiarahabana
Xiaomi Arch, finday avo lenta misy efijery miolakolaka hifaninana amin'ny Note Edge
Google dia nanamboatra ny iray amin'ireo bibikely mandreraka indrindra amin'ny Android 5.0 Lollipop